Miaro ny “Zo Hianatra Filozofia” any an-tsekoly ny Shiliana · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraNatali Herrera Pacheco
Voadika ny 22 Septambra 2016 5:19 GMT
Ny fiadian-kevitra amin'ny fanovana eo amin'ny fandaharam-pianarana sy ny mety hisian'ny fiovan'ny fianarana Filozofia no nahatonga ny Shiliana hisaintsaina ny maha zava-dehibe izay taranja hatolotra any an-tsekoly. Sary nalaina tao amin'ny Pixabay. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Tamin'ity herinandro ity tao Shily, nisamonimonina amin'ny mety hanesorana ny taranja filozofia amin'ny taranja tsy maintsy atao any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ireo mpisera tambajotra sosialy, mpianatra oniversite, ary ny vahoaka amin’ny ankapobeny .
Tamin'ny voalohany, nolazaina tamin'ny fiovana fa ny taranja filozofia dia atao taranjan-tsafidy ny fanaovana azy na atao ampahany amin'ny taranjan'ny fanabeazana olom-pirenena. Na izany aza, nilaza ny Minisiteran'ny Fampianarana fa ny soso-kevitra, izay lavitry ny hamerana ny fidiran'ny mpianatra hanao izany, dia mikaroka ny hampitovy lasitra ny fandaharam-pianarana manerana ny firenena mba hahatonga ny foto-kevitra misokatra kokoa ho an’ny ankamaroan'ny mpianatra .
Mbola tsy tapaka ny hanaovana ny taranja filozofia, nefa na eo aza izany, dia maro ny mahita ny fampifangaroana ity hevitra ity amin'izay efa mijoro ankehitriny hiteraka olana lalina. Hita ho mandray anjara amin'ny adihevitra misy ankehitriny na sojabe, na manam-pahefana amin'ny oniversite, na mpampianatra, ary mazava ho azy, ny fampitam-baovao. Isaky ny misy hetsika, maro no mino fa tandindonindoza ny fisian’ny taranja Filozofia any an-tsekoly.
Nanipy hevitra tao amin'ny tranonkala El Desconcierto (izay midika hoe “sahiran-kevitra” amin'ny teny espaniola) ny manam-pahaizana toa an'i Adolfo Estrella fa tokony ho anisan'ny fandaharam-pianarana feno izay mamporisika ny toe-tsaina mitsikera manoloana ny lahasa isankarazany sy ny taranja hianarana an-tsekoly ny filozofia :
(…) la Filosofía se defiende por sí sola. La asignatura de Filosofía, por su parte, merece ser defendida […]
[…] Miaro ny tenany ny Filozofia. Mendrika ny ho arovana kosa etsy andanin'izany ny taranjam-pianarana filozofia, […]
Nanambara i César Guadalupe, mpampianatra sy mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Pasifika avy ao Però, amin'ny fampidirana ny taranja filozofia ho ao anatin'ny taranja fanabeazana olom-pirenena – fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fahatakarana fa mampiditra fahalalana “ara-dalàna, ofisialy, tia tanindrazana, ary filozofika” ny fanabeazana mahaolom-pirenena. Ho an’i Guadalupe, dia ilaina ny manontany hoe: “inona moa no tiantsika ampianarina ny ankizy any am-pianarana izany? Fahalalana momba ny foto-kevitra sasantsasany, sa ireo fitambaran’ny fahaiza-manao?” Ary, raha amin'io voalaza farany io,” Inona amin’ireo fahaiza-manao ireo no tiana hohamafisina indray? “
Mandritra izany fotoana izany, naneho hevitra i Guido Larson, mpampianatra ao amin'ny Ivontoeran'ny Mahaolona ao amin'ny Universidad del Desarrollo na Oniversiten'ny Fampandrosoana amin'ny teny espaniola ao Shily, fa toa tsy noeritreretina tsara ny fiovana naroson’ ny Minisitera , na inona izany na inona :
El pensamiento crítico es una habilidad, una competencia que debe desarrollarse en la física, en las matemáticas, en la psicología o en la materia que sea. Uno puede reflexionar críticamente sobre la materia que desee.
Fahafaha-manao ny toe tsaina mahay mitsikera, fahaizana tokony hovelarina ao amin’ny fizika, matematika, psikolojia, na amin'ny lohahevitra hafa. Azo entina amin’ny toe-tsaina mahay mitsikera avokoa ny taranja tiana.
Etsy andanin'izany, ary amin'ny teny fanesoana no nanakianan'i Hernán Neira ny drafitry ny Minisitera:
Señora Ministra: tiene Ud. razón en eliminar Filosofía, ramo pérfido e inútil. Nuestros compatriotas, por ella, se preguntan cada día más por el sentido de la vida y quieren volver a ser humanos, hartos de ser consumidores de bienes materiales e inmateriales, como Educación Cívica.
Ramatoa Minisitra: Marina ny anao amin’ny fanafoanana ny Filozofia tsy ho ao anatin'ny taranja^m-pianarana, fa mamitaka sy tsy misy ilàna azy io. Fa noho io no mahatonga ny mpiray tanindrazana tsy mitsahatra manontany ny dikan'ny fiainana. Tian'izy ireo ny hiverina ho olombelona indray, leon'ny fanjifana fitaovana azo tsapain-tanana na tsia toy ny fanabeazana mahaolom-pirenena ry zareo.
Tsy fitaovana fiadiam-barotra ao anatin'ny ‘Fanabeazana Ara-Barotra Shiliana’ ny Filozofia
Maneho ny heviny amin'ny heverin'ny sasany ho dingana mifanaraka amin'ny toetry ny fanabeazana ao amin'ny firenena ny Shiliana ao anatin'ireo hafatra goavana tsy mety tapitra, ao anatin'ny fandaniam-bola ambony sy rafitra iray hitan'ny maro fa natao hanomezana fahafaham-po ara-toekarena fotsiny. Azo arahina amin'ny # Derechoalafilosofía [#zoHanaoFilozofia] ahitana fanehoan-kevitra, lahatsoratra, ary adihevitra mitohy ny fifanakalozan-kevitra:
Un #Chile sin memoria, sin educación cívica, sin filosofía, sin Historia, esta destinado al fracaso más rotundo
— Rocío Barrientos (@Chiobtos) August 30, 2016
Mampihazakazaka hivarina an-kady izany Chile tsy misy fahatsiarovana, tsy misy fanabeazana mahaolom-pirenena, tsy misy filozofia, tsy misy ny tantara izany
Ankoatra izay, ho fiarovana ny filozofia, nangatahan'ny hafa ny minisitra hiverin-dalana amin'ny fanaovana fanovana na hanao fandalinana tsaratsara kokoa hampahomby kokoa azy ity na ireo fanovana hafa rehetra.
: “Ministra, saque todas estas ideas raras de eficientismo barato” https://t.co/OnJ9z3CFP0 vía @eldesconcierto
— FernandoRubilar (@FernandoRubilar) August 30, 2016
“Natsipin-dRamatoa Minisitra avokoa ireo hevitra hafahafa rehetra hisian'ny fahombiazana mora vidy”
Filosofia, Cívica, todo cambió requiere validación docente y en Chile no se da. De ahí los fracasos y experimentación continúa #FilosofiaCHV
— marcelamomberg (@marcelamomberg) August 25, 2016
Filozofia, sivika , mila fankatoavan'ny mpampianatra izay fiovana rehetra atao ary tsy natao izany teto Shily. Izany no mahatonga ny tsy fahombiazana sy fisian'ny fanandramana hatrany.
Na dia Tambajotran'ny Shiliana Mpampianatra Filozofia (REPROFICH) aza dia namoaka fanentanana tamin'ny alalan'ny tranonkala Change.org antsoina hoe “Fanangonan-tsonia ho an'ny Minisiteran'ny Fanabeazana Shiliana. Fiarovana ny zo hanao filozofia”. Mikatsaka hanangona sonia 2500 ry zareo ahafahana mampanaiky ny hevitry ny mpampianatra ambony sy ny olom-pirenena mampitovy hevitra hanoherana ny fanovana ny fandaharam-pianarana. Efa nahangona sonia 1.811 ny pejy tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra [amin'ny teny espaniola] ity, .
Anisan'ny naneho ny fanohanany amin'ny tsy fandrarana ny filozofia ao an-dakilasy ny Oniversiten'ny Papa Katolika ao Valparaiso izay nizara ny adihevitra antsoina hoe “Fiarovana ny Filozofia”. Samy nandray anjara na ny mpianatra na ny mpampianatra, narovany ny fianarana filozofia ho zavatra mihoatra noho ny fanangonam-pahalalàna na singa ao anatin'ny “fanabeazana ara-barotra shiliana”. Ny ahiahin'ny mpandray anjara voalohany manodidina ny mety hanjavonan'ny taranja filozofia an-tsekoly dia ny mety isian'ny fialàn'ny fahalianana raha atao taranja azo atao na tsia na ampidirana azy ho ao amin'ny taranja fanabeazana mahaolom-pirenena. Mino izy ireo fa noho ny rafitra fifaninanana mamefy ny rafi-mpampianarana ofisialy ao Shily, dia mety ho tanteraka izany tahotra izany .
Mbola misokatra ny adihevitra , fa dia antenaina fa hahita fifanarahana ny andaniny sy ny ankilany. Na izany aza dia niteraka adihevitra vaovao ao Shily ny mahazava-dehibe ny fahatsiarovana fa vao herintaona lasa izay no nanao veloma ny filozofia an-sekoly ny Espaniola. Mety maro no manolokevitra fa miaina ireo fiovana ifotony ireo sehatra fampianarana ny mahaolona sy ny fahaizana mampiasa ny saina araka ny fahafantarantsika azy. Na izany aza, mbola ho hita eo ihany ny fiantraikany eo amin'ny fanofanana fitondrantenan'ny tanora sy ny olom-pirenena.
5 andro izayKolombia